नेपाली र अंग्रेजीका केही आश्चर्य र रमाईलो « नेपालबहस
नेपाली र अंग्रेजीका केही आश्चर्य र रमाईलो
प्रकाशित मिति : २५ असार २०७८, शुक्रबार १७:३४
पहिले नेपालमा प्रचलित भाषाका शब्दमा निहित रमाईलो अलिकति हेरौं । त्यसपछि अंग्रेजीको कुरा गरौंला । एक पूर्वमन्त्रीले बोलेको एउटा शब्द व्यंग्यपूर्वक उच्चारण भईरहने गर्छ ‘हेप्नी !’ तिरस्कारको अर्थमा यो शब्द आएको हो, तर लिम्बु भाषामा ‘हिप्नी’ भन्यो भने ‘पिट्छु’ भन्ने अर्थ लाग्छ, ‘खेने हिप्नी !’ भन्यो भने तँलाई पिटुँ ? भन्ने अर्थ हुन्छ ।
पूर्वी नेपालको भोजपुरमा एउटा गाउँको नाम छ, ‘छिनामखु’ । यो नाम कतिपय नेवारभाषीहरुलाई सुनाउँदा उनीहरु आश्चर्य मान्दै र हाँस्दै सोध्छन्, ठाऊँको नाम त्यस्तो पनि हुन्छ ? नेवार भाषामा ‘छिनं मखु’ भन्नाले ‘तपाईँ पनि होइन’ अर्थ लाग्छ भने गाउँको नाम नै ‘तपाई पनि होइन’ !
कुनै अंग्रेजीभाषीले लिम्बु साथीलाई सोधेछ, “क्यान यु सी मी ?” (मलाई भेट्न सक्छौ ?) साथैमा भएकी अंग्रेजी नजान्ने लिम्बुभाषी उनकी पत्नीले आफ्नै भाषाअनुरुप बुझिछन् ‘केः नुसीबी ?’ (सञ्चै छौ ?) ।
नेपालीको ‘हिरा’ शब्द लिम्बु भाषामा अमर्यादित शब्द हुन्छ स्त्री जननेन्द्रीयबोधक रुपमा । त्यसैले लिम्बु समुदाय खासगरी महिलाहरू भएको ठाउँमा हिरा भन्ने शब्द उच्चारणै नगर्नु वेश हुन्छ ।
नेपाली भाषाको जलपानलाई नेवार भाषामा ‘तुच्छा’ भन्नुपर्छ । तर यसो भनियो भने नेपालीमा नीच, चुत्थो, छोटो, नगण्य, अल्प, क्षुद्र, मन्द आदि अर्थको नजिक पुगिन्छ । नेवार भाषामा ‘या मते या मते’ (नगर नगर) भनिएजस्तै जापानी भाषामा पनि नगर–नगर भन्नलाई ‘या मते या मते’ नै भनिन्छ । दक्षिण एशियाली सबै भाषाहरूमा संस्कृत शब्द ‘वेद’ भनेपछि विश्वको सबभन्दा पहिलो (हिन्दु) धर्मशास्त्र भन्ने बुझिएजस्तै युरोपको चेक र स्लोभाक भाषामा ‘वेद’ को अर्थ विद्वान हुन्छ ।
कतै भाषाको अपभ्रंशले लज्जास्पद अर्थ दिइरहेको हुन्छ । जस्तै प्रसिद्ध नेवार जातिभित्र एउटा प्रतिष्ठायुक्त थर छ, ‘कंसाकार’ । वास्तबमा यो हुनुपर्ने ‘काँस्यकार’ (काँस धातुको काम गर्ने शील्पी) हो । तर शब्द विचार गर्ने हो भने ‘कंसको आकार’ भन्ने अर्थ लाग्न पुग्छ । त्यसै गरी ‘राज कर्णकार’ हुनुपर्नेमा अपभ्रंश भएर ‘राजकर्णिकार’ अर्थात राजपरिवारमा करणी गर्ने भन्ने हुनपुगेको छ। लिच्छवीकालदेखि आएको ‘स्थपति’ (कर्मी) शब्द अपभ्रंश भएर ‘स्थापित’ हुनपुगेको छ । यो प्रसंग उदाहरणको लागि मात्र प्रस्तुत गरिएको हो, कृपया अन्यथा नमानियोस् ।
शब्दको उल्टोपाल्टो भएर पनि अर्थ र आसय फरक पर्न जान्छ । जस्तै, “पोखरामा प्रहरीले जुवा खेलेको अभियोगमा ६ जनालाई पक्राउ गर्या” समाचार । झट्ट सुन्दा जुवा खेल्ने प्रहरी, पक्राउ पर्ने ६ जना भन्ने अर्थ लाग्छ । भाषा शैलीमा यस्ता उदाहरण बनिरहन्छन् ।
अब लागौं अंग्रेजीतिर
(१) संसारमा २ अर्बभन्दा बढी मानिसले जानेको भाषा भएकोले अंग्रेजीको विविधता ब्यापक छ । अमेरिकी, बेलायती, अस्ट्रेलियाली, क्यानाडाली, न्युजिल्याण्डी, भारतीय, द.अफ्रिकी, नाइजिरियाली गरी अंग्रेजीका ८ मुख्य व्याकरणगत भिन्नता, उच्चारण, हिज्जे, शैलीका संस्करणगत विविधता छन् । यति धेरै ब्यापकता र विविधता भएको अर्को भाषा चल्तीमा छैन ।
(२) अंग्रेजीबाट नेपाली भाषामा धेरै शब्द आएका छन् । तर कतिपय शब्दहरू अपभ्रंश वा जनजिब्रोका शब्द भएर जस्तै– ईस्कुल (School), अपिस (Office), कर्कट पाता (Corrugated Sheet), पिउन (Peon), अर्दली (Orderly), रिकुटे (Recruited), फ्याम्ली (Family) जनरल (General), सिपाही (Sepoy), पाएप (Pipe), तमाखु (Tobacco) ।
(३) ल्याटिन, रोमन र ग्रीक भाषाबाहेक अंग्रेजीमा सबभन्दा बढी शब्द नाटककार विलियम शेक्सपियर एक्लैले घुसाए छन्— १७ सय शब्द । उनका ३७ वटा नाटक र १५४ कविताभित्र पसेका रहेछन् आगन्तुक शब्द । केही उदाहरण– Assassination (हत्या), Advertising (विज्ञापन), Blanket (पाखी), Champion (विजेता) Gossip (बकम्फुसे कुरा), Generous (उदारमना), Lonely (एक्लो), Mimic (नकलबाजी), Ode (गीत वा ५० देखि २ सय पंक्तिको कविता), Puking (वाकवाकी÷वान्ता गरिरहेको), Torture (यातना), Zany (मूर्ख टाईपको ठट्टावाज, मारुनी नाचको पुर्सुङ्गे) ।
(४) उल्टो सुल्टो जता पढ्दा पनि उस्तै शब्द वा वाक्यांश बन्ने अवस्थालाई Palindrome भनिन्छ, जस्तै—Madam, Radar, Refer, Nurses run । नेपालीमा पनि यस्तो त हुन्छ तर यसलाई एकल शब्दमा के भनिन्छ, म जान्दिन— जहाज, पाल्पा, नवजीवन, गया–प्रयाग आदि । भार्वि कविले ‘किरातार्जुननीयम्’ मा सुल्टो उल्टो जताबाट पढ्दा पनि हुवहु उही शब्द र अर्थ दिने संस्कृत श्लोक नै लेखेका छन् ।
“ननुहो मथना राघो घोरा नाथ महो नुन,
तया दातबदा भीमा भीदा बतदायात ।।”
(५) नाम बाहेकका हिज्जे ( Spelling ) मा Q अक्षरका पछाडि U अवश्य आउँछ— Queen, Quarter, Qualm, Quotation; तर इराक –Iraq तारिक Tariq जस्ता नामका Q पछि U नआउन सक्छ ।
(६) एउटै शब्द बहुअर्थी पनि हुन्छन्— Pen (खोर, खोरमा थुन्नु, कलम), Saw (देख्यो वा देखेँ, आरा, लकडी, आरा चलाउने) । “मैले एउटा आरावाललाई आराले लकडी चिरिरहेको देखेँ” भनियो भने त्यसको अँग्रेजी यस्तो हुँदो रहेछ— I sawasaw, singingasaw withasaw .
झन् रोचक त यो वाक्य नै छ— Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo .। व्याकरण अनुसार यो वाक्य शुद्ध रहेछ । बफ्यालो भनेको भैँसी वा अर्ना (बिजन), न्युयोर्क नजिकको एउटा शहरको नाम पनि बफ्यालो, ताकेता वा धम्की दिनु पनि बफ्यालो, अर्को समुदायलाई पनि बफ्यालो भनिने ।
वाक्य बनाउँदा यस्तो हुनेरहेछ— बफ्यालोका अर्नाहरूको एउटा समुदायले अर्को समुदायका अर्नाहरूलाई धम्क्याएपछि अर्को समुदायका अर्नाहरुको समुदायले पनि बफ्यालोमै धम्की दिए . lbP -Bison from Buffalo, New York, that are intimidated by other bison in the community also intimidate other bison in Buffalo.
(७) अंग्रेजीमा मौनशब्द Silent Letters वा सुशुप्त उच्चारण Silent pronouciation पनि हुन्छन्, जस्तै gnat (न्याट अर्थात भसुनो), knife (नाइफ अर्थात चक्कु वा छुरा), aisle (अईल अर्थात कुर्सीहरू वा दराजको लहरमा बीचको बाटो), debt (डेट अर्थात ऋण), soften (सफन अर्थात नरम वा गिलो पार्नु, गलाउनु, लोलोपोतो गर्नु), dumb (डम अर्थात बोल्न नसक्ने) ।
(८) ब्याकरण अनुसार शुद्ध भए पनि कतिपय वाक्य अशुद्ध हुन्छन्, जस्तै: I am not there.
(९) अंग्रेजीमा एक One देखि नौ सय उनान्सय Nine hundred ninety nine सम्म लेख्दा एक ठाउँमा पनि A वाaअक्षर आउँदैन । तर हजार (Thousand) लेख्दा मात्र आउँछ ।
(१०) अंग्रेजीका स्वर वर्ण Vowel भनिने a, e, i, o, u नभएको शब्द हुँदैन तर Try, By जस्ता शब्दहरू सेमी भोवेल लगाएर बनाइन्छ । सेमी भोवेल लगाएर बनाएको सबभन्दा ठूलो शब्द Rhythm हो ।
(११) अंग्रेजीमा इगनज भन्ने प्रत्यय (शब्दको अन्तिममा जोडिने शब्दांश) लाई आठ भिन्न प्रकारले उच्चारण गरिन्छ । दिईएको यो वाक्यमा ती आठै प्रकारका उच्चारण गरिनुपर्ने शब्द मिलाईएको छ । “A rough-coated, dough-faced ploughman strode through the streets of Scarborough, coughing and hiccoughing thoughtfully.”
(१२) करिब दुईसय वर्षअघि अमेरिकी भाषाशास्त्रीहरूले ब्रिटिश अंग्रेजीका केही हिज्जे (Spelling) मा परिवर्तन र सुधार गरे । जस्तै : Colour (Brit.) Color (Am.) Armour (Brit.) Armor (Am.)
अन्त्यमा : के पनि देखिन्छ भने कतिपय अद्र्धशिक्षित वा अल्पशिक्षित मानिस नेपाली बोल्दा पनि अंग्रेजीका शब्द मिसाएर बोल्ने गर्छन् । तर ती कदाचित उचित शब्दको रुपमा हुँदैनन् । कतिसम्म भने अल्पशिक्षितले Constitution (संविधान) लाई Prostitution (वेश्यावृत्ति), भ्यालेन्टाइन् (Valentines) लाई प्यालेस्टाईन भनेको पनि सुनियो ।
अंग्रेजी सिक्नु अत्यन्त राम्रो, त्यसमा दखल हुनु झन् उत्तम हो । तर अंग्रेजी नै सबै कुरा होइन । नेपालीमा राम्रो दखल भएका नेपाली भाषीले आफ्नो भाषामै बोल्नु गरिमा हो, गौरब हो । शिक्षित र विकसित मुलुकका मानिसहरू आफ्नै भाषा बोल्नमा स्वाभिमानवोध गर्छन् । हो पनि । नभुलाैँ अंग्रेजी पनि नेपालीजस्तै एउटा भाषा हो यो स्वयं ज्ञान होइन English isalanguage as well as Nepali, but not knowledge itself शुद्ध नेपाली बोल्नुमा निरिहता र लघुताभास देखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अंग्रेजी सिकौँ, पोख्त बनौँ । शुद्ध नेपालीको प्रचलनमा जोड दिऔँ । पढ्ने, लेख्ने, बोल्ने र सुन्ने चारै प्रकारका अभ्यासद्वारा भाषामा पोख्त हुनसकिन्छ ।